Guddoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe oo gaaray deegaanka Biyo-Cadde | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Guddoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe oo gaaray...
Guddoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe oo gaaray deegaanka Biyo-Cadde
WARARKA SOMALIA	0
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Guudlaawe Xuseen, xubno ka tirsan maamulkiisa iyo saraakiil ciidan ayaa maanta gaaray deegaanka Biyo Cadde ee ka tirsan degmada Mahadaay, halkaasoo maalmo ka hor ay la wareegeen ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM.
Safarka Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku saabsanaa u kuur galka xaaladaha guud ee deegaanka, waxaana uu la kulmay Odayaasha deegaanka, isagoo kala hadlay sidii ammaanka looga shaqeyn lahaa, isla markaana adeegyadii bulshada loo soo celin lahaa.
Guddoomiye Guudlaawe ayaa sheegay in dadka deegaanka Biyo Cadde iyo deegaanada kale ay u bilaabatay nolol cusub, waxaana uu balan qaaday inay ka hirgelin doonaan deegaanka xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka oo aan deegaanka heysan.
Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa sheegay in dadka ku nool deegaanada la isku yiraahda afarta tuulo wixii hada ka dambeeya laga dul qaadi doono culeyska, isagoo xusay in dadka ay hoos-harsan doonaan dowladnimada sida uu yiri.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in deegaanada kale ee gobolka laga saari doono Al-Shabaab, isagoo intaa ku daray in maamulka gobolka uu ku dadaali doono sidii deegaanada la xoreeyay amnigooda loo xaqiijin lahaa.
Deegaanka Biyo Cadde ayaa waqooyi bari ka xigta magaalada Jowhar illaa 40-KM, waxaa deegaankaas uu caan ku yahay Ganacsiga maalinta Jimcaha, waxaana uu xudun u yahay dhamaan deegaanada la isku yiraahdo Afarta Tuulo.